Alefa foana Jean aa!
Mankasitraka anao aho ry Jean aloha amin’izao ataonao amin’ny boay kely eto an-tanàna izao fa tena reveko mihitsy aa!
Izahay maka anareo fa alefa foana Jean aa! Efa nampitolagaga ny rehetra ny dingana vitantsika ka tsy misy tokony hahamenatra amin’izany ee! Any Egypta mbola afaka manatsara lavitra. Sa ahoana, hoy ianao? Tsy efa amin’ilay hatahorana tsara amin’izay ve isika tonga any aorian’ireo lalao fitsapana maromaro mbola hatrehina atsy ho atsy? Raha mba ny mpitondra anay rangahy no mba hoatranareo izao dia mba efa ela angamba isika no tafiditra ao anatin’ny laharana 4 voalohany amin’ny manankarena fa tsy miady ho gidany ohatr’izao foana! Ianareo aza moa tamin’iny mbola novizanin’ny adala indray dia iny saiky nivarina tamin’indray mandeha iny! Ny tokantrano, hono, anefa tsy ahahaka ry Jean fa dia mankahery anao ee!